Credo - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Ny ivon'ny WKG > Izaho mino
Manantona an'i Jesosy Kristy
Ny soatoavintsika dia fitsipika fototra iorenantsika ny fiainantsika ara-panahy ary iatrehana ny anjarantsika iraisana ao amin'ny Fiangonan'izao tontolo izao amin'ny maha-zanak'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy.
Manantitrantitra ny fampianarana ara-Baiboly mahasalama izahay
Manolo-tena amin'ny fampianarana ara-Baiboly mahasalama isika. Mino izahay fa ny foto-pinoana manan-danja amin'ny kristianista ara-tantara dia ny iorenan'ny finoana kristiana, izay misy fifanarahana lehibe eo amin'ny niainan'ny Fiangonana manerantany - ary ny fotopampianana dia nohamafisin'ny fijoroan'ny Fanahy Masina. Mino isika fa ny tsy fitovian-kevitra amin'ny raharaha peripheral ao amin'ny Fiangonana Kristiana, na dia voajanahary sy tsy azo ihodivirana ary tsy eken'ny Baiboly aza dia tsy tokony hampisaraka ny vatan'i Kristy.
Manantitrantitra ny maha-kristiana an'i Kristy izahay
Amin'ny maha-kristiana antsika, dia nomena antsika vaovao i Jesosy Kristy. Amin'ny maha miaramila azy, ny namany ary ny rahalahiny ary manana fitaovana ilaina mba hitarika ilay tolona ara-pivavahana tsara isika - manana azy isika! Nampanantena i Jesosy fa tsy handao na tsy hanadino antsika, ary raha mipetraka ato amintsika izy, dia tsy hiala aminy na ianarantsika isika.
Manantitrantitra ny herin'ny filazantsara izahay
Hoy i Paoly: “Fa tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin’Andriamanitra no mamonjy izay rehetra mino azy» (Romana 1,16). Miditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra ny olona amin’ny alalan’ny famaliana ny filazantsara. Ao amin'ny Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany isika dia mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Manaiky an’i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy ny olona. Mibebaka amin’ny fahotany izy ireo, mampiseho ny tsy fivadihany sy ny tsy fivadihany aminy, ary manao ny asany eo amin’izao tontolo izao. Miaraka amin’i Paoly isika dia mino ny filazantsara ary tsy menatra izany satria herin’Andriamanitra hamonjy izay rehetra mino izany.
Manamafy ny fanomezam-boninahitra ny anaran'i Kristy izahay
Jesosy, izay maty ho antsika sy tia antsika dia miantso antsika hanome voninahitra azy amin'ny fiainantsika manontolo. Noho ny fahafantarantsika fa tsy voavonjy amin'ny fitiavany isika, dia olona iray tsy maintsy manaja azy amin'ny fifandraisantsika rehetra, ao an-trano, amin'ny fianakaviantsika ary eo amin'ny manodidina antsika, amin'ny fahaizantsika sy ny fahaizantsika, ao amin'ny asantsika, ao ny fotoanantsika malalaka, ny fomba andaniantsika ny volantsika, ny fotoanantsika any am-piangonana ary ny orinasanay. Na inona na inona fahafahana, fanamby na kintana lalovantsika, dia manolo-tena hatrany ny mitondra voninahitra sy voninahitra ho an’i Jesoa Kristy isika.
Manantitrantitra ny fankatoavana ny fanjakan'Andriamanitra mahery indrindra ao amin'ny Fiangonana izahay
Nofaizan’ny Raintsika any an-danitra be fitiavana ny fiangonantsika. Izy no nitarika antsika hiala tamin’ny fahadisoan’ny fotopampianarana sy ny fandikana diso ny Soratra Masina ho amin’ny fifaliana madio sy ny herin’ny filazantsara. Amin’ny maha-mahefa ny zavatra rehetra azy, araka ny fampanantenany, dia tsy nanadino ny asa fitiavana ataontsika izy, na dia tao anatin’ny tsy fahatanterahantsika aza. Nataony manan-danja ho antsika ny traikefantsika teo aloha amin’ny maha-fiangonana antsika satria anisan’ny diantsika manokana mankany amin’ny finoana feno ny Mpamonjy antsika izany. Miaraka amin’i Paoly isika izao dia afaka milaza hoe: “Eny, mbola heveriko ho manimba ny fahalalana mihoa-pampana an’i Kristy Jesosy Tompoko izany rehetra izany. Noho ny aminy no nahatonga izany rehetra izany tamiko, ary heveriko ho fahalotoana izany mba hahazoako an’i Kristy. Ry rahalahiko, mbola tsy mihevitra ny tenako ho azoko aho. Fa zavatra iray loha no lazaiko: manadino izay ao aoriana aho ka miezaka hanatratra izay eo aloha, dia mikatsaka ny tanjona izay voatendry, dia ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. » (Filipianina) 3,8.13-14).
Manamafy ny fanoloran-tena sy fankatoavana ny antson'ny Tompo izahay
Ny mpikamban'ny Fiangonan'Andriamanitra eran-tany dia olona voatokana amin'ny fomba nentim-paharazana, maniry ny hanao ny asan'ny Tompo. Ao amin'ny fitarihana ny vondrom-pinoantsika ny finoana mankany amin'ny fibebahana, ny fanavaozana ary ny fanavaozana, ny Raintsika any an-danitra tsara fanahy dia nampiasa io toe-tsaina io fanoloran-tena sy fankatoavana amin'ny asan'ny filazantsara sy amin'ny anaran'i Jesosy. Mino ny asan'ny Fanahy Masina amin'izao fotoana izao sy mavitrika isika amin'ny alàlan'ny fitarihana sy hanome hery ny kristiana hanana fiainana masina amin'ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty.
Manantitrantitra ny fahatsapana fanompoana izahay
Satria noforonina isika rehetra mba hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, dia mino ny fiankohonana maneran-tany sy fiderana falifaly an'ny Tompontsika sy Mpamonjy antsika mifototra amin'ny kolontsaina
Diniho ny fahatsapan-tena ary ilaina. Satria tsy mitovy amin'ny fiaviany sy ny tsiron-javatra ary ny filàntsika ny mambra, dia miezaka manompo an'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fomba sy fahafahana manandanja isan-karazany, mampitambatra ny fomba nentim-paharazana sy ankehitriny amin'ny fomba manome voninahitra ny anaran'ny Tompontsika.
Manantitrantitra ny vavaka izahay
Ny vondrom-pinoantsika dia mino ny mivavaka sy manao ny vavaka. Ny vavaka dia ampahany manan-danja amin'ny fiainana ao amin'i Kristy ary ampahany lehibe amin'ny fanompoana ary koa ny fanompoana manokana. Mino izahay fa ny vavaka dia mitarika amin'ny fidiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika.